ရေဒွန် - ဝီကီပီးဒီးယား
အက်စ်တက်တိုင်း ← ရေဒွန် → ဖရန်စီယမ်
အားနပ်စ် ရူသာဖို့ဒ် နှင့် Robert B. Owens (၁၈၉၉)
ဝီလျံ ရမ္မဆေး နှင့် Robert Whytlaw-Gray (၁၉၁၀)
အတည်ငြိမ်ဆုံး ရေဒွန်၏ အိုင်ဆိုတုပ်များ
syn 2.4 h α 6.404 206Po
syn 14.6 h ε 2.892 211At
trace 3.8235dα 5.590 218Po
syn 1.8 h β− 0.8 224Fr
ရေဒွန် (radon) ဓာတုသင်္ကေတ (Rn) သည် စံအပူချိန်နှင့် ဖိအားတွင် အရောင်မရှိပါ။ အပူချိန်သည် ၎င်း၏ ရေခဲမှတ်အောက်တွင် တောက်ပသော အဝါရောင်ရှိသည်။ ၎င်း၏ ရေဒီယိုသတ္တိကြွမှု အလွန်မြင့်မားပြီး တိုးတောင်းသော half-life လည်းရှိသည် ။
၄ ပတ်ဝန်းကျင်သို့ အကျိုးသက်ရောက်မှုများ
ရေဒွန်ကို တစ်ခါတစ်ရံ ဆေးရုံများတွင် ကင်ဆာရောဂါ ကုသရာတွင် အသုံးပြုပါသည်။ ရေဒွန်ကို hydrologic research တွင်လည်းအသုံးပြုပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းသည် လေထဲတွင် လျင်မြန်စွာ ဆုံးရှုံးသွားသည် ။ ထို့အတူ geologic research တွင်လည်း အသုံးပြုပါသည်။
ရေဒွန်ကို အချို့သော စမ်းရေများနှင့် ရေပူစမ်းများတွင် ရှာဖွေ တွေ့ရှိနိုင်သည်။ လေထုထဲမှာ ရေဒွန်၏ ပမာဏကို မည်သည့် နည်းဖြင့်မဆို မြင်သာစေသည်။
ရေဒွန်ကို အဓိကအားဖြင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဓာတ်ငွေ့ရောနေသော ပြောင်းလဲမှု အဆင့်ဆင့်တွင် တွေ့ရသည်။ ရေဒွန်၏ နောက်ခံအခြေအနေအရ လေထုအပြင်တွင် ယေဘူယျ အားဖြင့် ငြိမ်သက်စွာ တည်ရှိပြီး တစ်ခါတစ်ရံ အတွင်းဘက်သို့ ရောက်နေချိန်တွင် လေထဲမှ ရေဒွန်၏ ပါဝင်မှု သည် မြင့်တက်လျက် ရှိသည်။ အိမ်၊ ကျောင်း၊ အဆောက်အဦးများတွင်လည်း ရေဒွန် ပါဝင်မှုသည် တိုးတက်လျက်ရှိသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ရေဒွန်သည် အဆောက်အဦး၏ အက်ကွဲကြောင်းများမှ တဆင့် အဆောက်အဦး၏ အခြေခံအုတ်မြစ်များ၊ မြေတိုက်များထဲသို ့ဝင်ရောက်သွားသည်။
အချို့နက်ရှိုင်းသော နေရာများတွင် ရေသောက်သုံးလျှင် ရေနှင့်အတူ ရေဒွန်လည်း ပါဝင်နိုင်သည်။ ရေဒွန် ပါဝင်မှုသည် မြေအောက်ရေထဲတွင် သိသာစွာ မြင့်တက်လျက်ရှိသည်။ သို့သော် ၎င်းကို အသုံးပြုမယ်ဆိုလျှင် ရေ၏ မျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ ထုတ်လိုက်သည်နှင့် တပြိုင်နက် လေထုထဲသို့ ထွက်သွားသည်။ ရေဒွန်၏ မြင့်မားတဲ့ ပါဝင်မှုကို စူးစမ်းလေ့လာမှုအရ အသက်ရှူနေချိန်တွင် ရေဒွန်ဖြတ်သွားခြင်းကို lung diseases ဖြစ်စဉ်ဟုခေါ်ပါသည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာရှည်စွာ ထိတွေ့နေလျှင် ရေဒွန်ပမာဏ ပိုမိုတိုးပွားလာပြီး အဆုတ်ကင်ဆာရောဂါ ဖြစ်ပွားမှု ပိုမိုများပြားနိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ ရေဒွန်သည် ရေဒီယိုသတ္တိကြွသော ဒြပ်စင်ဖြစ်သော်လည်း ၎င်းသည် gamma radiation အနည်းငယ်ကို ထုတ်ပေးနိုင်သည်။ အဆုတ် သို့မဟုတ် တစ်ခြား အင်္ဂါတွေအပေါ် ရေဒွန်၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို မသိရှိနိုင်ပါ။ ရေဒွန်၏ သက်ရောက်မှုများကို အစားအစာခြင်း နှင့် ရေသောက်ခြင်း ၌သာ သိရှိနိုင်သည်။ အခြားနေရာများတွင် မသိရှိနိုင်ပါ။
ရေဒွန်သည် ရေဒီယိုသတ္တိကြွ ဒြပ်ပေါင်း တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်းကို သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွင် မကြာခဏ တွေ့ရသည်။ ရေဒွန် ဒြပ်ပေါင်းကို ပတ်ဝန်းကျင်မှ အများဆုံး ရရှိမှုမှာ လူတို့၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာများမှ ဖြစ်သည်။ ရေဒွန်သည် ပတ်ဝန်းကျင်သို့ စိုစွတ်သောမြေ၊ Uranium phosphate mines နှင့် coal combustion များကိုဖြတ်ပြီး ဝင်ရောက်လာသည်။ ရေဒွန်အချို့သည် စိုစွတ်သော မြေထဲတွင် တည်ရှိနေပါသည်။ ထို့နောက်ရေငွေ့ များကိုဖြတ်၍ မျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ တက်လာပြီး လေထုထဲသို့ ဝင်ရောက်သွားသည်။ လေထဲတွင် ရေဒွန်ဒြပ်ပေါင်းသည် ဖုန်၊ မြေမှုန့် အစရှိသည့် အမှုန်များနှင့် ပေါင်းစပ်သွားသည်။ ရေဒွန်သည် လေထုထဲမှ အောက်သို့ ကျကာ စိုစွတ်သောမြေကြီးမှ တဆင့် မြေအောက်ရေထဲသို့ ဝင်ရောက် သွားနိုင်စွမ်းလည်း ရှိသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ ရေဒွန် အများစုသည် စိုစွတ်သောမြေထဲတွင် ကျန်ခဲ့သည်။
↑ Haynes၊ William M., ed. (2011)။ CRC Handbook of Chemistry and Physics (92nd ed.)။ Boca Raton, FL: CRC Press။ p. 4.122။ ISBN 1439855110။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ရေဒွန်&oldid=734717" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၇ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၂၊ ၁၇:၂၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။